विद्रोहीले एका बिहानै १४ मन्त्री कब्जामा लिदै सिंहदरबार नै कब्जा गरेपछि… – नेपाली सूर्य
January 24, 2018 August 14, 2018 Nepali SuryaLeaveaComment on विद्रोहीले एका बिहानै १४ मन्त्री कब्जामा लिदै सिंहदरबार नै कब्जा गरेपछि…
२००८ साल माघ ८ गते अर्थात् रामप्रसाद राई र डा. केआइ सिंहको नेतृत्वमा सिंहदरबार कब्जा भएको दिन !
माघ ८ एउटा ऐतिहासिक दिन नै हो । रामप्रसाद राई र डा. केआइ सिंहको नेतृत्वमा सिंहदरबार कब्जाको प्रयास माघ ८ गतेकै रात भएको थियो । नेपालको इतिहासमा राजा महाराजाले गरेको ‘कु’ बाहेक जनताको तर्फबाट सिंहदरबार कब्जा गर्ने प्रयास गरिएको पहिलो घटना विसं.२००८ माघ ८ गते रातिको हो । विदेशमा विद्रोहमार्फत् केन्द्रीय सत्ता कब्जाका घटनाहरु हुने गरे पनि नेपालमा चाँहि रामप्रसाद राई र डा. केआइ सिंहबाहेक अरुले यस्तो दुस्साहस गर्न सकेका छैनन् ।
सिंहदरबार कब्जा गरेर मन्त्रीहरुलाई नारायणहिटीतिर खेदिसकेपछि डा. केआइ सिंहले सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, सेनाले २४ घण्टामा सिंहदरबार फिर्ता लियो । केआइ सिंह भाग्न सफल भए भने रामप्रसाद राईसहितका विद्रोहीहरु मारिए ।
यसरी भएको थियो सिंहदरबार कब्जा
करिब तीन घण्टासम्म टुँडीखेल र सिंहदरबारबाट दोहोरो फायरिङ भयो । सिंहदरबारभित्रबाट विद्रोहीले र टुँडीखेलबाट सेनाले फायरिङ गरे । केही सैनिक घाइते भए । एकजना नागरिकको मृत्यु भयो । रक्षादलका ड्राइभरको मृत्यु भयो । अन्ततः विद्रोहीहरु सिंहदरबारको पर्खाल नाघेर भाग्न थाले । विद्रोह सुरु हनासाथ आ-आफ्नो घरबाट लुक्दै राजदरबारमा शरण लिन पुगेका थिए ।
माघ ९ गते बिहानै केआइ सिंहलाई भेट्न गणेशमान सिंह र टंकप्रसाद आचार्य सिंहदरबार गए । केआइसिंहले राजालाई हामी रक्तपात चाहँदैनौं, केवल आत्मरक्षा चाहन्छौं र सर्वदलीय सरकार गठन होस् भन्ने माग राख्न चाहन्छौं भन्ने खबर पठाए | तर, दरबारबाट यसको उत्तर लिएर आउँदासम्म केआइ सिंहले सिंहदरबार छाडिसकेका थिए । अन्ततः माघ १० गतेसम्म काठमाडौंको स्थिति समान्य बन्यो ।
नेपाल सरकारले डा. केअाइ सिंहलार्इ पोलिटिकल लिडर भन्दै २ रूपैयाँको हुलाक टिकट जारी गरेको छ । त्यस्तै प्रजातान्त्रिक योद्धा रामप्रसाद रार्इको नाममा ७५ पैसाको हुलाक टिकट जारी भएको छ।
पीएएसल खेलेर भाेलि स्वदेश फर्कँदै सन्दीप, केही दिनमै आईपीएल खेल्न दिल्ली जाँदै